मध्यरातमा मतपत्र च्यातिएपछि मतगणना स्थगित भयो » खबरहरुको एउटै केन्द्र
मध्यरातमा मतपत्र च्यातिएपछि मतगणना स्थगित भयो
सोमबार, जेष्ठ १५, २०७४ ०५:२३ मा प्रकाशित !
चितवन, जेठ १५ गते । स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिकाको मत गणना भइरहेको समयमा मध्यरातमा मतपत्र च्यातिएपछि अनिश्चितकालका लागि मतगणना स्थगित गरिएको छ ।
च्यातिएका मतपत्रलाई मुचुल्का गरेर राखिएको छ । नेकपा ९एमाले०का प्रमुखका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले हार्ने भएपछि माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेको बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रले भने एमालेलाई दोष लगाएको छ । मतपत्र च्यातेको र प्रहरी माथि हातपात गरेको भन्दै प्रहरीले तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापाका अनुसार पक्राउ पर्नेमा माओवादीका द्रोणबाबु सिवाकोटी र ईश्वर सापकोटा एवम् एमालेका गङ्गालाल लामा रहेका छन् ।
PREVIOUS POST Previous post: संसदमा आज २०७४/७५ का लागि बजेट पेस हुने
NEXT POST Next post: एमाले, काँग्रेस, माओवादीलको उम्मेदवार निर्धारण भयो
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, जेष्ठ १५, २०७४ ०५:२३
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, जेष्ठ १५, २०७४ ०५:२३
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, जेष्ठ १५, २०७४ ०५:२३
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, जेष्ठ १५, २०७४ ०५:२३
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, जेष्ठ १५, २०७४ ०५:२३